03 Afyonkarahisar Hotels | RayHaber | raillynews
Afyonkarahisar ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ ala
Ihe ngosi banyere uzo ikpeazu batara na oru ngo AFRAY
Onye isi ụgbọelu steeti Turkey steeti Ali İhsan Uygun gara Mịnịsta Mehmet Zeybek n'ọfịs ya.fyonkarahisar Vice Veysel Eroğlu na onye isi ala okporo ụzọ steeti Ali İhsan Uygun bịarutere n’ọrụ anyị n’Afrika. [More ...]
Anyị mụbara ihe megide coronavirus na bọs ọha anyị, ebe ọtụtụ puku ụmụ amaala na-eme njem kwa ụbọchị. N'ihi coronavirus na-eyi ụwa egwu, a na-eme usoro mgbochi na obodo ndị ụgbọ ala ọha na-eje ozi n'ime obodo nke Afyonkarahisar. obodo [More ...]
Mmụta gafere ọkwa na Sandıklı
Onye isi oche mpaghara TCDD 7th bụ Adem Sivri gara Onye isi ala Mustafa Çöl n'ọfịs ya iji nyochaa ọrụ nke ọkwa ga-eme na mpaghara Sandıklı nke Afyonkarahisar ma gbanwee echiche. A ga-eme ya na Sandikli [More ...]
Ntinye aka oru ngo nke ime obodo AFRAY, otu n’ime ihe ndi a hoputara na ntuli aka nke Mehmet Zeybek, onye isi obodo nke Afyonkarahisar. A ga-egbu mkpụrụ ndụ mbụ na mbido 2021 TCDD na 7th Regional Directorate of State Railways. [More ...]
Ọrụ Mmata Ahụike na Afyonkarahisar Train Station
Ndị otu ahụike na-emeghe na Gar Waiting Hall n'ime oke nke Ihe Omume Ahụike ahụ ahaziri na Ali Çetinkaya Station n'okpuru nhazi nke TCDD 7th Regional Directorate, Taşımacılık AŞ Coordinator na Afyonkarahisar Provicial Health Directorate, Onye Ọkachamara ADH. [More ...]
Obi dị nro maka ọrụ ụgbọ ala USB, nke ndị ndị Afyonkarahisar na-echere, emesịala gbaa ụgwọ. A ga-eme ihe ngosi a na Machị 4 na yonlọ Nzukọ Mgbakọ Afyonkarahisar. Otu uzo eji abanye ulo abuo nke nwere ulo abuo nke agaghari na Afyonkarahisar Castle [More ...]
Onye isi ogbe mpaghara nke TCDD nyere Gọvanọ Gọvanọ Sivri nke Sivri
The Republic of Turkey State Railways (TCDD) Afyonkarahisar 7. Adam Sharp gara Regional Director na mbon soro Governor Ugur capers n'ọfịs ya. Adam kwuru TCDD Regional Director nke nleta, na Republic of Turkey State Railways [More ...]
Ingbọ olof na njem na Afyonkarahisar See ụgbọ ala ejidere gwongworo! Na Afyonkarahisar, sistemụ njem nke TCDD Taşımacılık A. hit. kụrụ aja nwere ngwongwo elu ụwa nke juru n'obere ọkwa na-enweghị usoro mgbochi. Ndi mmadu 1 merụrụ ahụ n'ihe ọghọm ahụ. [More ...]
Mayor Mehmet Zeybek'in oru AFRAY, nke bụ otu n'ime nkwa nke atụmatụ ntuli aka na ọmụmụ rụpụtara ihe dị mma. Mayor Zeybek gwara ODAK n'okwu a, “A ga-eme ntanetị ọrụ AFRAY n'ọnwa Ọktọba. [More ...]
Onye Ọdụ -gbọ njem-Sen Jidere 5 nke Nzukọ Mgbakọ mpaghara nke TCDD
5 nke nzukọ ọgbakọ na mpaghara, nke onye isi-Sen nyochara usoro nkwekọrịta mkpokọta na ndị otu ahụ, bụ nke emere na Afyonkarahisar site na ntinye aka nke Eskişehir na Afyonkarahisar. Kenan Çalışkan, Onye isi oche nke Transportgbọ njem na Senates, İbrahim [More ...]
N'ihi afọ 163 nke TCDD, Adem Sivri, Onye Isi Nchịkwa mpaghara nke TCDD 7 mere nleta Gọvanọ Afyonkarahisar Mustafa Tutulmaz. Onye isi ogbe Mpaghara Sivri gara na TNUMD 163 akụkọ ihe mere eme kwa afọ na Kọmitii Mpaghara [More ...]